Muuri News Network » Dhageyso:Mas’uulka tirsan K/Galbeed oo ka warbixiyay Xalada Magaalada Marka.
Dhageyso:Mas’uulka tirsan K/Galbeed oo ka warbixiyay Xalada Magaalada Marka.
May 28, 2016 - Comments off
Xildhibaan Maxaad Maxamed Ciise oo ka mid ah Xildhibaanada Maamulka Konfur Galbeed Soomaaliya oo Wareysi gaar ah siyay Warbaahinta ayaa sheegay in asiga iyo Xildhibaano ka tirsan Dowladda Soomaaliya ay in dhawaanaba ay kormeer ay ku marayeen qeybo ka mid ah Gobolka Sh/Hoose,waxaa uuna intaa ku daray in ujeedka safarkoodu uu yahay sidii ay ugu kuur gali lahayeen dad ku nool Degaanada Gobolka Sh/hoose Xaladdaha ay ku nool yihiin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in danta gaar ah ay mesha ay u tageen ay tahay sidii dib u heshiin loo dhex dhigi lahaa belaha kuwada dagaalamaya Degaano ka tirsan Gobolka Sh/hoose sidoo loo heshiisin lahaa.
Dhanka kale waxaa uu sheegay in hada ay ku sugan yihiin mudo 8 maalin ah Magaalada Marka ee Xarunta u ah Gobolka Sh.Hoose,islamarkaana waxaa uu intaa ku daray in dadaalo badan ay ugu jiraan sidii ay u nabadeen lahayeen qalalaasaha iyo dagaalada ku soo labaanaya qeybo ka mid ah G/Shabeelada Hoose ,sidoo xal looga gaari lahaa arintaa.
Sidoo kale Waxaa uuna Xildhibaanka intaa ku daray in kormeel koodu uu ku saleysan yahay sidii qaabka ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay dagaaladi ka dhacay Magaalada Marka xaladahooda, islamarkaana ay hadda magaalada ay tahay mid xasiloon wax dagaalna aysan ka jirin.
ISHA WARARKA OO—DHAN